Qoysas Fara Badan Oo Ka Barakacay Magaalada Libooya. – Calamada.com
Qoysas Fara Badan Oo Ka Barakacay Magaalada Libooya.
calamada May 31, 2018 1 min read
Wararka ka imaanaya magaalada Libooya oo ka mid ah dhulka ay Kenya xooga kaga heysato Somaliya ayaa sheegaya in saacadihii lasoo dhaafay magaaladaasi ay kaso barakaceen tobaneeyo qoysas ah kuwaas oo so gaaray xadbeenaadka ay wadagaan wadamada soomaaliya iyo Kenya.
Dadkani oo ka kooban Haween Caruur iyo dad da’ ah ayaa so gaaray xadbeenaaka kuwaas oo laga dheehan karayay dhibaatadi ay kaso carareen.
Barakaca qoysaskani ayaa ka dambeeyay kadib dhibaatooyin xiriir ah oo ay kala kulmayeen ciidamada kuffaarta Kenya ee gumaysiga ku haysta deegaanadaasi
qof ka mid ah dadkii libooya kaso barakacay oo u waramay andalus ayaa quus kamuujiyay nolol xumada kajirta halkaas.
Isagoo si hadlaya ayuu sheegay qofkani ka mid ah dadkii libooya kaso barakacay in xaalad adag ay ku heysato xadbeenaadka ay wadaagaan dalka soomaaliya iyo kenya, sidaasoo ay tahay qorshahooduna uu yahay ineysan halkaasi dib ugu laaban sababo ku aadan dhibaatada oo wali ka taagan deegaankii ay kaso carareen.
Muslimiinta dalka Kenya ayaa gumaad xoogan kala kulma askarta nasaarada Kenya, iyagoo sanadihii laso dhaafay wajahayay dhibaatooyin isugu jira dil xarig iyo boob loo geysanayo hantidooda.
Boqolaal ka tirsan dhalinyarada Muslimiinta ah ayaa horey uga soo hijrooday dhulalka Muslimiinta ee ay Kenya gumaysiga ku haysato iyagoo soo biiriyay sufuufta Mujaahidiinta, balse waxaa muuqata in hada ay bilaabatay in qoysas dhan ay deegaanadaas kasoo barakacaan iyagoo raadinaya goobo ay kaga nabadgalaan gumaysiga Saliibiyiinta Kenyaatiga.
Previous: Halkan Ka Dhageyso Warka Subaxnimo 15-09-1439 Hijri.
Next: Dhageyso Darsiga Tobanaad Ee Kitaabka Waxaat Jihaadiyah.